Seddex Sir Oo Qarsoodi Ah Oo Aadan Ka Ogeyn Ciidanka Gaarka ah Ee Haramacad | Xaqiiqonews
Seddex Sir Oo Qarsoodi Ah Oo Aadan Ka Ogeyn Ciidanka Gaarka ah Ee Haramacad
Ciidanka booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramacad ayaa noqday “sheeko cabsi leh” , waxaane jira waxyaabo badan oo qarsoodi ah kuwaasi oo warbaahintu aysan ka sheegin ciidankan gaarka ah.
1# Ma ahan boolis
Inkastoo ciidankani ay wataan magaca “booliska gaark ah” haddana waa arin marag ma doonto ah in ciidankani ay yihiin ciidamo gaar ah kuwaasi oo qabanaya shaqooyin ka baxsan kuwa loogu talagalay boliiska,
Howlgaladii ugu dambeeyey ee ciidankani ay ka fuliyeen gobolada Gedo iyo Galgaduud ayaa ku fulin in ay tusaale cad u noqdaan shaqada qarsoon ee ciidankan, kuwaasi oo loo ekeysiiyey in ay yihiin “boliiska nabadda”.
2# Mushaarkooda Waa Khiyaali
marka loo barbardhigo ciidamada kale ee DF, mushaarka ciidanka Haramacad waa “mid Khiyaali ah” , askariga ka tirsan ciidankani waxa uu bishii mushaar ahaan u qataa 3 laab lacagta ay qaataan celcelis ahaan ciidanka kale ee DF.
“waxa au qataan bishii lacag $600” ayuu yiri qof diiday in magaciisa saxaafadda loo adeegsado, isaga oo intaai o ku daray “ha u maleynin ciyaar ciyaar ciidankani”
“Waxa ay u dhimanayaan lacag darteed” ayuu sii daba dhigay isaga oo ii sheegay in ciidankani niyad ahaan yihiin kuwo dhisan, isla markaana ka niyad fiican ciidamada kale ee DF.
3#Masaska ayey cunaan!
Ciidankani waxa ay leeyihiin xirfad gaar ah taasi oo suuraglein karta in ay u dhaqmaan sida “gumaandooska”.
Madaxweynaha Puntland Saciid Deni ayaa ciidkani ku tilmaamay “walaac dhab ah” oo soo wajahay Puntland, sidoo Kale Axmed Madoobe oo ciidamadani ka hadlay ayaa isna ku sifeeyey waxa uu ugu yeeray “ciidankii Naasiyiinta”, isagoo oo tilmaamay in ciidankani ay yihiin kuwo xasuuq u geystay dad rayid ah —sida uu hadalka u dhigay.